Uyibhala njani inoveli: isimo sengqondo sombhali oyinyaniso | Uncwadi lwangoku
Sifikelele kwisithuba sokugqibela Monograph yethu malunga nendlela yokubhala inoveli, apho besiphonononge khona, njengesiqulatho, ezahlukileyo iingcebiso kunye nezinto ekufuneka ziqwalaselwe ngokobuninzi beencwadana ezinikezelwe ekudalweni kwendalo.
Kwaye ngayo sikulethela okokugqibela kwamasango ahlala ecebisa: Isimo sengqondo sokubhala.
Oku kubandakanya uthotho lwe ukugwetywa kunye namasiko Siza kuzama ukuphonononga kwaye ezo ntlobo zahluke kakhulu.
Okokuqala, kufuneka sicace gca yintoni esikhokelela ekubeni sibhale, yintoni injini esiqhubayo. Ngenxa yoku kufuneka sizibuze ukuba kutheni le nto sibhala kwaye sinyanisekile kwimpendulo. Ukuba impendulo yethu yalatha ku impumelelo, ukwamkelwa, udumo okanye imali Le nto ayikhangeleki intle: nokuba azinazo izizathu ezaneleyo zokunikezela ngobomi bakho ekubhaleni (kwaye uyenze ngehlombe lokwenyani) kwaye ayizizo iinjongo ezifezekiseka ngokulula kwindawo yangoku yokubhala.
Ukucaphula enkulu UCharles Bukowski, Kwimbongo yakhe So So Want to Writer, "Ukuba ayitshisi ngaphakathi (...) ungayenzi."
Ndibhala ngaphandle kwesidingo sokwenza njalo. Oko kubonakala kukuphela kwempendulo efanelekileyo nesisigxina kubabhali abaninzi bezobugcisa. Nayiphi na enye impendulo iya kukukhokelela ekubeni uphelelwe ngamandla endleleni.
Olunye lweengcebiso eziphindaphindwe kakhulu ziincwadana zemigaqo, ezibaluleke kakhulu, ngokuqinisekileyo zibonakala ngathi kukungafuneki: eyona nto angayenza ukubhala kukuqala ukubhala.
Nangona kunjalo, ukuba silijonga ngocoselelo eli binzana siza kubona ukuba liqulathe inyani enkulu kakhulu. Bonke ababhali bacinge ukuba babekho ngaphambi kokuba babhale. «Ndingayibhala le nto, ndiyiguqulele enye. Kwiinoveli zam kuyakubakho la manqaku kwaye abalinganiswa baya kuziphatha ngale ndlela »…. Kodwa ayisiyonto, ukuba nje ingaphakathi kwengqondo yakho. Njengoko sele sibonile, ukubhala kufuna ukuziqhelanisa, ukufunda, kunye nokuphuculwa okungapheliyo, kodwa ayizukwenzeka de ube unesicatshulwa sokuqala ukujonga ngokunzulu ukuqala ukupholisha isitayile sakho.
Isimo sikwabonisa ukuba nesibindi. Sukuvumela uloyiko lokusilela okanye ukusilela kukugcine ekuzameni: iimpazamo sisiseko sophuculo, zilithuba lokukhula njengombhali. Sukucinga kakhulu malunga nesiphumo sokugqibela, okanye upapasho, okanye abafundi (ubuncinci ngaphezulu kokuyimfuneko kuba ukwamkelwa yinxalenye engenakuphepheka yenkqubo yonxibelelwano kwaye ke inoveli, njengomyalezo eyiyo, kufuneka ibalwe ukuya kwinqanaba). Bhala nje, kwaye ungoyiki okuzayo.
Elinye icebo elinomdla ukuze ube nesimo sengqondo esifanelekileyo yile ilandelayo: funda yonke into onokuyenza. Sondela kubabhali abahlukeneyo, chukumisa zonke iintlobo, onke amaxesha kunye neentshukumo. Sukuzikhawulela ekufundeni uncwadi, funda umatshini wokushicilela, izincoko, iincwadana (kunokwenzeka ukuba kwelinye icandelo lomsebenzi wakho kufuneka uphinde uvelise enye yezo ntetho). Hlanganisa kangangoko unako kwiindlela ezahlukeneyo apho unokufaka khona izinto kwaye ngaphezu kwako konke, zihlakulele ngokwakho kangangoko kunokwenzeka: ukubhala inoveli kukulahla okukhulu kwezimvo, into engenakwenziwa ngentloko engenanto yomxholo.
Elinye icandelo lesimo esifanelekileyo ubume bokungalahli. Ungawushiyi umsebenzi wakho embindini, lawula amandla akho kakuhle: luhlanga olude. Uninzi lubhala lungayeki kwinyanga yokuqala luze luchithe iiyure ezimbalwa ngempelaveki nganye ugqibezela inoveli eseleyo, ukufumana iziphumo ezingalinganiyo kuwo omabini la maxesha. Ukoyisa iibhlokhi xa zisenzeka, yeka ngokwenza enye into kwaye emva koko ujongane nayo ngamandla amakhulu.
Kukwabalulekile ukuba ulumke, vumela iprojekthi yokubhala ifunxe iintsuku zakho kwaye uvule amehlo kunye neendlebe: imihla ngemihla uya kufumana izinto oza kuzidibanisa nomsebenzi wakho kwaye oko ngokuqinisekileyo kuya kukusindisa ekuvinjelweni ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Simkile okokugqibela iingcebiso ezimbini esizibona zibaluleke kakhulu zeencwadana zokudala ezilandisayo zihlala zibonelela.
Inye inokulandelayo: Ukuqhubeka kunye nesiqhelo. Yiba neshedyuli engaphezulu okanye encinci, zama ukubhala yonke imihla okanye ubuncinci uhlale kwikhompyuter okanye iphepha elingenanto nokuba akukho nto iphumayo. Yiba nendawo enocwangco (nokuba yeyakho i-odolo) oza kusebenza kuyo ngaphandle kokuphazanyiswa nangubani na kwaye ugcine ixesha elaneleyo. Uyazi xa uqala ukubhala kodwa awusoze wazi ukuba ugqiba nini: ukuba amagama ayahamba kusoloko kulungile ukuba ungawushiyi nje ngesiqingatha ukuze uzalisekise okunye ukuzibophelela. Ukubhala kufuna italente encinci kunye nomzamo omkhulu, umsebenzi kunye nokuzinikezela.
Kwaye okokugqibela ingcebiso yokugqibela kunye neyona ibaluleke kunazo zonke: Yonwabele into oyenzayo ... kungenjalo akukho nanye kwezi iya kuba sengqiqweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Indlela yokubhala inoveli: isimo sengqondo sombhali wenene
Iindaba ezi-5 zokufunda ngo-Agasti. Incinci yayo yonke into.